Naijeria emela mpụ idina mmadu n’ike nsogbu a ga elebara anya ngwa-ngwa. · Global Voices n’asusu Igbo
Ndi mmanye iwu ga aga n'ihu ime ka ndi omekome zaa ajụjụ ma hụsie anya dịrị ha.
Translated byUzoma Ozurumba
Translation posted 26 July 2020 1:51 GMT
Read this post in Italiano, русский, Ελληνικά, Español, Français, English
Triple G: Otu nke a n'akpọ “Girls Go for Greatness” ndi otu ha bi na steetị Legọs na Ogun na nzukọ omụmụ ihe nke akpọrọ “Guard Against Rape” na Legọs na ọnwa abụọ na ụbọchi iri na atọ, na afọ 2016, site CEE Hope na Flickr CC BY 4.0.
Ọ bụ mpụ idina mmadu n'ike di iche iche nke mere na ọnwa ise na isịị kpaliri mmụọ ndi a: Edinara Barakat Bello n'ike ma gbụo kwa ya na ụlọ ya; Egbukwara Vera Uwa Omozuwa na ụlọ ụka nọ na Benin, Naijeria; yana nwata nwanyi ọzọ gbara afọ iri an abụọ, onye nke ndi dimkpa iri na otu dinara n'ike na steetị Jigawa, na ndida Nigeria.
Na ụbọchi nke iri abụọ na atọ nke ọnwa isịị, Seyitan mere nkwupụta site na enyemaka onye nnọchite anya iwu ndi akpọrọ “Stand To End Rape” (STER), ikwupụta ihe anya ya hụrụ maka ikpuhe ihe mere ya:
Ihe nkea di ọjụọ. Ndi Uwe-oji Naijeria ga ekperiri @iamdbanj ikpe maka itụrụ ma ikpọchi mmadu (s269/270) ajọ omume nke ikpe nkwụmọtọ (s97), yana ebubo na abụghi eziokwu (s93) n'ime mpụ iwu nke steeti Lagos. Na a ga enyekwa ndi Uwe-oji mere ihe a ntaramahuhu.
Ime mpụ ihe aga elebara anya ngwa-ngwa pụtara na ndi uwe-oji kwesiri iji nchisa gbasara idina mmadu n'ike kpọrọ ihe, mana ụmụ nwanyi akọla akụkọ otu ndi uwe-oji; ma nke ụmụ nwoke ma di nwanyi si akwa ha na ndi nnọchite anya iwu dutara ha emu.
Mgbe emechara nnyocha nke ọma, ebubo megide @MusadiqZ nọ eba (nke @FakhuusHashim @fatousky @crankysolicitor @KingNelo2 @AmiraYSalisu @AhmadJaafaru @FatimaSalihijo @_AfricanHippie @Ice131Queen na ndi ọzọ mere) etinyere foto ya ebe a. Ọgba! #ArewaMeToo
“Ndi isi ga agba mbọ ozugbo-ozugbo na eleghi anya n'azu kpọputa Maryam Aiwasu @Ice131Queen onye nke nani ihe omere bụ ikpuhe eziokwu maka ọdinma na ikikere nke ụmụnwanyi. #FreeMaryamAwaisu #ArewaMeToo @PoliceNG @unwomenafrica @aishambuhari #Nigeria
Ndi otu dika Mayafi Initiative na enyere ndi mmadu aka na ihe gbasara nkwado iwu na mmekọrita mmadu na steetị ndi nọ na ndida. Ha n'eme ka ọ diri ụmụ nwanyi inweta enyemaka mfe. Mana ọ di ezigbo mkpa ka ndi mebe iwu ga n'iru ime ka ndi omekome ndia hushie anya kwesiri omume ha.